Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. ब्लग – Page4– Janata Live
मानिसका सबैका आ-आफ्ना गुण हुन्छन् । ती गुणले व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । ती गुण र बानीले नै मानिसको भविष्य निर्धारण भएको हुन्छ र उसको विशेषता समेत बताइरहेको हुन्छ । मानिसको बानीले, उसमा भएका गुणले ऊ कत्तिको बुद्धिमान व्यक्ति हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वैज्ञानिकहरुले पनि केही त्यस्ता गुण वा बानीलाई व्यक्तिको क्षमता मापन गर्ने आधार बनाएका छन्। बुद्धिमान व्यक्ति राती अबेरसम्म पनि सुत्दैन । उसलाई निन्द्रामा समेत छटपटी हुन्छ । लिओनार्दो दा भिन्ची दिनको करिब तीन घण्टा मात्र सुत्ने गर्थे र सफल भएका धेरै व्यक्तिहरुको बारेमा पढ्दा पनि यस्तो तथ्य फेला पर्छ। वैज्ञानिकहरुका अनुसार, बुद्धिमान व्यक्तिले...
पुरुषले आफ्नो यी तिन अंग हेरोस् भन्ने चाहन्छन महिलाहरु
एजेन्सी - प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ । महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् । पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् । हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू...
मान्छे हराएको सूचना ! सबैले आफ्नै बुहरी सम्झेर १ सेयर गरिदिनुहोला ! तपाईंको १ सेयरले बुहरी भेटिन सक्छिन् । सक्दो सेयर गरौं
मिति २०७६/२/२३ गते जिल्ला सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका वडा–४ सेलाङकट्टी बस्ने मिङमार शेर्पाको श्रीमती लमु शेर्पा बाह्रबिसे बजारबाट ४ वर्षको छोरालाई समेत छोडि सम्पर्क बिहिन भएको हुँदा तपाईंहरुले कतै देख्नु भयो भने नजिकैको प्रहरी चौकीमा सम्पर्क गरि सहयोग गरि दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । हुलियाँ नाम थरः लमु शेर्पा उमेरः २७ वर्ष ठेगानाः भोटेकोशी–४ मोबाईलः ९८६१३७५०२१ कपडाः जिन्स पेन्ट र भेष्ट लगाएको कपालः कालो, लामो अनुहारः लामो भएको वर्णः गहु गोरो (मंगोलियन जस्तो देखिने) वैबाहिक अवस्थाः बिबाहित उचाईः ५" फिट फेला परेमा सम्पर्क नं. ९७४५०४६४९० (ससुरा,तेम्बा रेन्जेन शेर्पा),अथवा तलाको नम्बरमा सम्पर्क गरि सहयोग गरि दिनुहोला । धन्यवाद !९८०८९४४५११ (सालो), ९८६१८६७७९८(भाइ)...
पैसाको बोझ !
हाम्रो जीवन यस्तै एउटा महासागर हो र हामी यसका यात्री । यो यात्रामा कहाँनिर पुग्दा के हुने हो ? हामी कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । यो कथा कुनै एकादेशको हो । जुन मैले धेरै पहिले नै सुनेको थिएँ । तर यसले दिनखोजेको सन्देश भने हामी सबैका लागि अझै पनि ताजा नै छ । कुनै समय एकजना धेरै सफल ब्यापारी थिए । उनको ब्यापार समुन्द्र पारी थियो । उनी ब्यापारको क्रममा दिनहुँजसो डुंङ्गा चढेर ओहोर दोहोर गर्थे । उनलाई राम्ररी डुंङ्गा खियाउन (चलाउन) आउँदैनथ्यो । न त पौडिन नै सक्थे । उनी यति ब्यस्त थिए कि उनलाई पौडिन सिक्ने समय थिएन...
एकजना भैरव नाम गरेको शिकारी थियो । एकदिन धनु–बाण लिएर शिकारको खोजीमा वनमा पस्यो । त्यहाँ उसले एउटा मृग मा-यो । त्यो मृग काँधमा हालेर फर्कन लाग्दा बाटामा एउटा भयंकर बँदेल देख्यो । मृगलाई भुइँमा राख्यो र बँदेललाई ताकेर बाण हान्यो । बँदेल बाणले लागे पनि खुत्रुक्कै मरेन । घाइते मात्र भयो । अनि बाणका चोटले बौलाएर शिकारीमाथि जाइलाग्यो । बँदेलको भीषण प्रहारले शिकारी ठहरै मरिहाल्यो । साथै बँदेल पनि घुर्लुप्प भइहाल्यो । ती दुई छटपटाइरहेका थिए । आहाराको खोजीमा निस्केको एउटा सर्प पनि त्यहीँ कच्याककुचुक्क भएर म-यो । एउटा कति दिनदेखिको भोको स्याल पनि आहारको खोजीमा घुम्दै फिर्दै त्यहाँ...
उडुसले हैरान पारेको छ ? यी हुन् उडुस भगाउने केही घरेलु विधिहरु
उडुस जस्ता विषालु कीराको बारेमा सोच्दा मात्र पनि कतिपयलाई राति निद्रा नै पर्दैन । उडुसको टोकाइबाट शरीर चिलाउने, सुन्निने तथा एलर्जी हुने गर्छ । उडुस सानो र छिट्टै लुक्ने परजीवी भएकाले यसलाई खोजेर निर्मूल पार्न एकदमै कठिन हुन्छ । एउटा माउ उडुसले आफ्नो जीवन कालभर ५ सय अण्डा पार्छ । ती अण्डाबाट निस्कने बच्चाले पछि फेरि अण्डा निष्कासन गर्छ । यसरी प्रत्येक पिढीमा तिनको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र यिनीहरू झुण्ड हुँदै पूरै घरभरि फैलन्छन् । त्यसैले, तिनको रोकथाममा जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै प्रकोप बढ्छ र नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुन्छ । उडुसलाई निर्मुल पार्न यसकारणले पनि कठिन छ कि,...
तपाइँ अविवाहित हुनुहुन्छ अथवा विवाह गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक पढ्नोस् हैं…
सुहागरात भन्नासाथै सबैलाई एकप्रकारको रोमाञ्च, डर अनि बेग्लै प्रकारको अनूभति हुन्छ। चाहे केटा वा केटी, विवाहित वा अविवाहित। विवाहितलाई सम्झना हुन्छ, अविवाहितलाई त्यो अविष्मरणीय रात्रीको कल्पना हुन्छ जुन रात आफ्नो मनको राजकुमार या राजकुमारीसँग पहिलोपल्ट बित्नेछ। यसै रातबाट तपाईको जीवन नयाँ किसिमले अगाडि बढ्दछ। त्यो रात कति व्यक्तिका लागि सुखद रहन्छ भने कतिका लागि दु:खद। पुरुष मित्रहरुलाई लक्षित गरेर लेख्दै छु, महिला मित्रहरुले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ पहिलो प्रभाव नै अन्तिम प्रभाव हो (First Impression Is Last Impression) । सुहागरात त्यही पहिलो प्रभाव (Impression) छाड्ने रात हो जसको प्रभाव, स्मरण तपाईको जीवन साथीलाई जीवनभर रहन्छ। दाम्पत्य जीवनको सफलता र विफलतामा...
अति नै मार्मिक अनि मुटु छुने एउटा प्रेम कहानी…एकपटक अवस्य हेर्नुहोस्
केटीः एउटा खुशीको खबर छ, भनुँ ? केटीः के ? केटीः म गर्भवती भा छु नि ! केटाः (केटीलाई स्वीकार गर्दैन..! किनकी त्यो केटी उसको लागि केवाल टाइम पासको लागि थिइ।) ..केटा त्यो केटीलाइ भन्छ, तिमी हरेक पटक कलेजमा प्रथम हुन्छौं... र यो पल्ट पनि तिमी प्रथम हुनेछौ, तर मेरो घरको लागि एक सिम्पल केटी चाहिन्छ...।। केटीः ठीक छ...दुई दिन पछि म तिम्रो घर आउने छु...! मम्मीलाई भेट्न... मम्मीलाई भेट्नुपर्ने सानो काम छ । (दुइदिन पछि...केटालाई लागेको हुन्छ... उसले ममीलाइ सबै कुरा बताइदिन्छे... केटाः मलाई माफ गरिदेउ...सबै मरो गल्ती हो।। केटीः ठीक छ... केइ छैन... तर मलाइ ममीसँग भेट्न देऊ......
यसकारण राती कहिल्लै पनि भान्सा कोठामा जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ? नत्र…
किन राती सुत्दा कहिल्लै भान्सा कोठामा जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ? ज्योतिषशास्त्र र वास्तुशास्त्रसंग जोडिएका कैयौँ यस्ता साना कुराहरुबारे जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । १. राति सुत्नु अघि जहिले पनि घरको भान्सा कोठा र बाथरुममा एक बाल्टिन पानी भरेर राख्ने गर्नुहोस् । भान्सा कोठामा पानी भरेर राख्दा ऋणबाट मुक्ति मिल्दछ भने बाथरुममा पानी भरेर राख्दा जीवनमा उन्नतिको बाटोहरु खुल्दछन् । २. घरको मुख्य ढोका अगाडी फोहोर कहिले नराख्नुहोस,भनिन्छ यसो गर्नाले छिमेकी शत्रु बन्न पुग्छन्। ३. खाना खाएपछि भान्सा कोठामा जुठो भाडा कहिले नराख्नुहोस् । यदि रातमा भाडा माझ्न सकिदैन भने पानीले पखालेर मात्र भएपनि राख्नुहोस् तर जुठो नराख्नुहोस् । जुठो...